प्रधानमन्त्री ओलीलाई च्यालेन्ज नगर्न गगन थापालाई महेश बस्नेतको सुझाव - Dainik Online Dainik Online
प्रधानमन्त्री ओलीलाई च्यालेन्ज नगर्न गगन थापालाई महेश बस्नेतको सुझाव
प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७७, बिहिबार ६ : १०
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेञ्ज गरेर बालहठ देखाउने काम नगर्न प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसका सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन।
प्रतिनिधिसभाको विहीबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र विभाजको स्थिति बनेको अवस्थामा अस्वस्थ्य खालका छलफल सदनमा चल्न थालेको टिप्पणी गरे।
उनले सांसद गगन थापालाई इंगित गर्दे विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरुको चेलाहरुले भूमिका खेलिरहेको भनी कटाक्ष गरे।
उनले भने “प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेञ्ज गरेर बालहठ देखाउने कतिपय साथीभाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने, यो बोकाको शैलीले दाईँ गरिदैन र दाईँ गर्नका लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ र आज संसदमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असंख्य योजनाहरुलाई हामीले सके सहयोग गरौ । नसके बस्तुनिष्ठ ढंगले त्यसको विरोध गरौ ।”
प्रधानमन्त्री राजनेताको रुपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिदै आएको भन्दै उनले सरकारले गरेका विकास निर्माणकाका कामको विरोध गर्ने सांसदहरुलाई ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक चाहिदैन’ भनी भन्न चुनौति दिए।
उनले भने “रानी पोखरी बनेको, धरहरा ठडिएको, भानु स्कुल बनेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? एकदिनमा १ सय ९६ अस्पताल सिलन्यास भएको कुराले, १ सय ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रसंग सम्बन्धीत सडकहर रणनैतिक सडकको रुपमा सिलन्यास हुदा किन टाउको दुख्दैछ? एउटा सांसद भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर एउटा सडक प्रस्तुत गर्छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ भन्नुहोस्।”
मेलम्ची, धरहरा लगायत निर्माण आयोजनाहरुको फेयरिस्त दिदै उहाँले सरकारले बैदेशिक व्यापार र गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरे।
उनले भने “यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका निमित्त अख्तियारलाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालयलाई व्यवस्थित गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान जस्ता कार्यालयहरु व्यवस्थित भएका छन् । अनि विगतमा भ्रष्टाचार गरेका नेताहरु अहिले फरार छन् । ती कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस् । ती नेताहरु अहिले हामीलाई थुन्दैछ सरकारले भनेर गायव भईरहेका छन् । डराईरहेका छन् । टिभिमा इन्टरभ्यु दिईरहेका छन् । ती नेताहरु कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस् । ”
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु “कुतर्क ” भएको टिप्पणी गरे।
उजले भने “कतिपय साथीहरुले भन्नुभयो । नेकपा विभाजित भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । यो कु तर्क हो । ”
उनले माओवादी केन्द्रले दिएको विश्वास फिर्ता लिन पनि नसकेको र अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले भने “हिजो नेकपा एमालेलाई न पोथी न भाले भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले आज न पोथी न भालेको अवस्थामा छ र उसले न विश्वासको मत फिर्ता लिनसक्छ, न अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउन सक्छ।”
उनले सभामुखले संसदमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री आएपनि सहभागी हुने वतावरण नमिलाएको आरोप लगाए। उले एक महिनाको दौरानमा ६ पटक बैठक बसेको र पहिलो दिनको बैठक नै ढिलो गरी सुरु हुदा ४५ मिनेट बसेर प्रधानमन्त्री फर्किएको उल्लेख गरे।
उनले भने “जुन दिन प्रधानमन्त्री ज्यु आउनुभयो । त्यो दिन सभामुख लगायत कार्यव्यवस्था समितिले ढिलासुस्ति गर्ने र आलटाल गर्ने। पहिलो बैठककै विषय हामी हेर्छो, अध्यादेश पेश गर्न नदिन माओवादी केन्द्रले वहिष्कार गर्यो। कांग्रेसले रोष्टम घेर्ने काम गर्यो। यो तितो यथार्थ र इतिहास हामी सबैले सम्झेका छौ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो सदनमा भन्ने ढंगले कुरा उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जबरजस्ती पनि मागिदै छ। प्रधानमन्त्रीलाई गलहत्याउने पनि कुरा गरिदै छ। कतिपय युवा साथीहरुले प्रधानमन्त्रीसंग ठाडठाडै बस गर्ने चुनौति पनि दिईरहनुभएको छ।”